Nei MediaLight isiri kutengeswa paAmazon.com? - MediaLight Bias Chiedza
Iwe uchaona kuti hatitengesi MediaLight paAmazon.com. Isu pachedu tinotenga zvigadzirwa zvakawanda paAmazon, semaprinta makadhibhokisi nemabhuku, asi zvinhu zvakawanda zvinoshandira zvigadzirwa zvemiti hazvienderane nechigadzirwa checheki seMediaLight.
Isu hatitore sarudzo, senge kusanyora zvigadzirwa zvedu mutengesi mukuru wepasirese, zvishoma. Zvisinei, Amazon yakanga ichikurudzira zvinhu zvisingawirirane zvinogona kukuvadza mwenje wekusarura uye kubvumira zvinyorwa zvedu kubiwa nevatengesi vezvimwe zvigadzirwa.
Kufunga kuti iwe waikwanisa chaizvo kutenga chaiyo MediaLight paAmazon. Kana iwe ukabatanidza iyoAmazon-yakakurudzirwa 12v magetsi emagetsi (pazasi) kune LX1 kana MediaLight, iwe wold wakabva wakanganisa mwenje wekusarura nekuti mwenje yedu inomhanya pane USB simba uye iyo LX1 neMediaLight yakapihwa 5v.
Ehe, takavhara chero kukanganisa kubva zvisiri izvo mazano eAmazon pasi peMediaLight Warranty, asi raive dambudziko rakakomba. Isu takaedza kushanda nerutsigiro rwevatengesi kuti tibvise izvo zvisirizvo zvinokurudzirwa, asi hazvina kubudirira.
Paive nedzimwe nyaya dzakakomba, asi idzi dzaive dzakanyanya kukuvadza.
Aya ndiwo marudzi ematambudziko anoita kuti mamaneja amuke husiku, saka takaunza kutengesa uye kuzadzikiswa mumba. Zvese zvigadzirwa uye zvishandiso pane ino saiti zvinovimbiswa kushanda neyako bias mwenje uye zvinotumirwa zuva nezuva kubva kudura redu muNJ. Zvese zvinyorwa zvedu ndezvechokwadi uye iwe uchagamuchira izvo zvawakaraira. Uye webhusaiti yedu inosanganisira yakawanda ruzivo rwakakosha nezveMediaLight, LX1 uye bias magetsi mune zvese, hapana chimwe chazvo chatakakwanisa kuisa paAmazon.
Unogona kubhadhara neAmazon Pay pane webhusaiti yedu uye unakirwe nekuchengetedzwa kumwe chete kwaunowana kana iwe uchihodha paAmazon, asi isu hatitenge zvigadzirwa zvedu zveMediaLight pawebhusaiti yeAmazon, uye tinovimba kuti izvi zvinobatsira kutsanangura zvikonzero zvedu. sei.
Zvinyorwa uye kurudziro zvinosiyana nenyika. Kana iwe ukawana iyo pasi rose mutengesi achitengesa pamusika wepasi rose weAmazon uye anoda kuona kuti vanobvumidzwa here, unogona kutirovera runhare.
Previous nyaya Hurukuro yakareba pamusoro pekusarura mwenje naTodd Anderson kubva kuAVNirvana.com
inotevera Ndingaisa sei magetsi ekurerekera kuitira kuti ndikwanise kuendesa kune imwe TV (kana kuabvisa zviri nyore mune ramangwana)?